Vaovao - Antony lehibe iray manimba ny kalitaon'ny tavoahangy divay fitaratra
Inona avy ireo mason-tsivana hamantarana ireo tavoahangy divay misy vera mahay? Ny mpanamboatra tavoahangy divay vita amin'ny vera Easypack dia hilaza aminao ny tena anton-javatra misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny tavoahangy divay fitaratra: voalohany hamantarana ny kalitaon'ny anatiny ao anaty tavoahangy divay iray vera, mazava ho azy fa fitiliana fitsapana mangatsiaka sy fitsapana adin-tsaina anatiny no takiana aminao. Miandrasa fitsapana maromaro. Rehefa mahazo tavoahangy misy divay vera madio sy mamirapiratra isika, tsy misy fahasamihafana loko, tsy misy kofehy lo na fanokafana, ary ny fanambanin'ny tavoahangy dia mitovy amin'ny hateviny ary tsy misy lesoka miharihary, azo isaina ho vera mahay izy io tavoahangy divay. Raha mijery ny tavoahangy misy divay vita amin'ny vera amin'ny hazavana manjelanjelatra, dia misy bubble kely matevina amin'ny vatan'ny tavoahangy. Ny vokatra mivantana amin'ity toe-javatra ity dia ny tsy fahatomombanana anatiny ny tavoahangy divay misy vera, izay vokatry ny tsy fahampian'ny mari-pana amin'ny dobo mitsonika sy ny fihenan'ny ranon-javatra fitaratra. Eny, olana momba ny kalitao lehibe io. Faharoa: Raha mihombo ny tampon'ny bobongolo aorian'ny fampiasana maharitra na tsy ampiasaina maharitra dia miteraka fahalotoana sasany hanakona ny volon'ny lasitra, ny tavoahangy divay vita amin'ny vera dia ho kely ihany. Na dia tsy misy fiatraikany amin'ny kalitao amin'ny fotony aza, dia misy fiatraikany lehibe amin'ny endrika ivelany.
Tavoahangy sy kapoaka fitaratra no be mpampiasa, ary ny tavoahangy sy kapoaka fitaratra dia tokony hanana fahombiazana ary hanaraka fenitra tsara kalitao. Ity manaraka ity dia fampidirana fohy ho an'ireo mpanamboatra fampiharana, manantena ny hanampy ny ankamaroan'ny mpanamboatra mividy:
①Kalitao fitaratra: madio sy fanamiana, tsy misy kilema toy ny fasika, tadiny ary miboiboika. Ny vera tsy misy loko manana mangarahara avo; ny lokon'ny vera miloko dia mitovy sy milamina, ary afaka mandray angovo maivana amin'ny halavan'ny halavany sasany.
②Toetoetra ara-batana sy simika: manana fahamarinan-toerana simika izy io ary tsy mifandray amin'ny atiny. Izy io dia manana mari-pahaizana mahatohitra fanoherana sy tanjaka mekanika. Izy io dia mahatanty ny fizotran'ny fanafanana sy ny fampangatsiahana toy ny fanasan-damba sy fanamorana ny volo, ary koa ny fanoherana ny famenoana, ny fitehirizana ary ny fitaterana. Mety hijanona tsy simba io rehefa tojo fihenjanana anaty sy ety ivelany sy any ivelany ary ny vokany.
③Kalitao mandrafitra: mitazona fahaiza-manao, lanja sy bika sasany, hatevin'ny rindrina mitovy, vava malefaka sy fisaka mba hahazoana antoka fa feno sy feno famehezana. Tsy misy lesoka toy ny fanodinkodinana, tampon-tany tsy mitovy, tsy fitoviana ary triatra.
Ny mpanamboatra tavoahangy fitaratra dia afaka manamboatra indrindra ao anatin'izany ny fanomanana ny batch, ny famafana, ny famolavolana, ny fandrindrana ary ny fanodinana ary ny fanodinana ary ny famonosana.
①Fiomanana amin'ny batch: ao anatin'izany ny fitehirizana, ny fandanjana, ny fampifangaroana ary ny fampitana ireo fitaovana vita amin'ny batch. Ny fitaovana vita amin'ny batch dia takiana mba hifangaro amin'ny fomba mitovy ary hanana fifangaroana simika azo antoka.
②Mitsonika: Ny fikolokoloana vera tavoahangy dia tanterahina ao anaty lafaoro fandoroana afo mitohy (jereo lafaoro fandrendrehana fitaratra). Ny famoahana isan'andro ny kilaometatra fandrehitra afo dia mihoatra ny 200t, ary ny lehibe dia mahatratra 40000 t. Ny vokatra isan'andro an'ny fatana fandoroana vita amin'ny soavaly dia ambany indrindra amin'ny 200t. Ny mari-pana amin'ny fitaratra fitaratra dia hatramin'ny 1580 ～ 1600 ℃. Ny fanjifana angovo amin'ny solika dia mitentina eo amin'ny 70% amin'ny totalin'ny angovo amin'ny famokarana. Afaka mamonjy angovo amin'ny fomba mahomby amin'ny alàlan'ny fanamafisana tanteraka ny tanky, fampitomboana ny fahaizan'ny biriky mpanamarina ao amin'ny mpamorona, ny fanatsarana ny fizarana ny antontam-bato, ny fampitomboana ny fahombiazan'ny fandoroana ary ny fifehezana ny fitambaran'ilay ranon-vera. Ny fivoahana ao anaty fitoeram-pandehanana dia afaka manatsara ny fifangaroan'ny ranon-vera, manamafy ny fizotran'ny fanazavana sy ny homogenisation ary mampitombo ny vokatra. Ny fampiasana ny fanafanana herinaratra amin'ny lafaoro dia afaka mampitombo ny vokatra ary manatsara ny kalitao raha tsy mampitombo ny lafaoro.
Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy,